ရိုက်တာ သတင်းထောက် ကိုဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦးတို့ လွတ်မြောက်ရေး အတွက် မွန်နှင့် ကရင်ပြ?? - Yangon Media Group
ရိုက်တာ သတင်းထောက် ကိုဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦးတို့ လွတ်မြောက်ရေး အတွက် မွန်နှင့် ကရင်ပြ??
မွန်ပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့မှ သတင်းထောက်များ ဆန္ဒထုတ်ဖော်စဉ်။(ဓာတ်ပုံ- AHO)
မော်လမြိုင်၊ စက်တင်ဘာ ၇
မြန်မာနိုင်ငံတော် လျှို့ဝှက်ချက်များ အက်ဥပဒေပုဒ်မဖြင့် ထောင်ဒဏ်ခုနစ်နှစ် ချမှတ်ခံရသည့် ရိုက်တာ သတင်းထောက် ကိုဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦးတို့ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက် မွန်ပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့မှ သတင်းထောက်များ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းကို စက်တင်ဘာ ၇ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီက မော်လမြိုင်မြို့၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြသော သတင်းထောက်များသည် မော်လမြိုင်မြို့ ကမ်းနားလမ်း ဘိုးဘွားရိပ်သာစားသောက်ဆိုင်စုရပ်မှ အောက်လမ်းမကြီးအတိုင်း၊ အောက်လမ်းမကြီးမှ မဂ္ဂင်လမ်းဘက်သို့ ချိုးကွေ့ပြီး ဗဟိုလမ်းမှတစ်ဆင့် ကျိုက်သုတ်စေတီတော်ရင်ပြင်သို့ ကြွေးကြော်သံများဖြင့်ကြွေးကြော်လမ်းလျှောက်ကြပြီး ကျိုက်သုတ်စေတီတော်ကို လက်ယာတစ်ပတ်ပတ်ကာ စေတီတော် စနေထောင့်၌ ကိုဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦးတို့ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဆီမီးပူဇော်၍ ဝတ်ပြုဆုတောင်းကြသည်။
”နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက် အက်ဥပဒေနဲ့ ငြိတယ်ဆိုပြီး သတင်းထောက် ကိုဝလုံးနဲ့ ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကို ထောင်ချလိုက်တဲ့အပေါ်မှာ သူတို့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် အခုလို ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာပါ။ သူတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံလျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေနဲ့ အမိန့်ချလိုက်တာဟာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့ သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေတွေမှာပါရှိတဲ့ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်နဲ့ လွတ်လပ်စွာရေးသား ဖော်ထုတ်ခွင့်တွေကို မျက်ကွယ်ပြု ပြီး သတင်းလောက မီဒီယာလောကကို ခြိမ်းခြောက်လိုက်တာပါပဲ”ဟု The Speaker ဂျာနယ်မှ သတင်းထောက် ကိုမျိုးအောင်က ပြောကြားသည် ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများသည် သက်ဆိုင်ရာသို့ တရားဝင်ခွင့်ပြု ချက်တင်ပြ၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
မာရာဒိုနာကို နည်းပြအဖြစ် မက္ကဆီကို ဒုတိယတန်းကလပ် ခန့်အပ်
စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး၏ ခြောက်လ ဘတ်ဂျက်မှ သန်း ၈ဝဝ ကျော် လွှဲပြောင်းသုံးခြင်းကို လွှတ်တော် ??
အစိုးရ၏ နှစ်နှစ်အတွင်း ပြောင်းလဲပေးသည့် အရာများ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကို မဲပေးခဲ့သည့် ပြည်သူ
လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် ရခိုင်အရေး ကိုဖီအာနန် ရှင်းလင်း၊ အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်များကို ထေ
ဒဏ်ရာကြောင့် စထရာဘော့နှင့် ပွဲကို နေမာ လွဲချော်
ညောင်ဦး၊ ပခုက္ကူတောင်သူများ လက်ဝယ်မြေပဲဆန် မရှိတော့သည့်အချိန် မြေပဲဆီဈေးနှင့် မြေပဲဆန်ေ?
Share 104 Tweet 0
အယ်လ်ဖာ ဘိလပ်မြေစက်ရုံ ဆောက်လုပ်မှု ဖျက်သိမ်းရေး တောင်းဆိုသော ဒေသခံများအနက် သုံးဦးကို လမ်းတံတား ဥပဒေအရ အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် ၁၄ လ ချမှတ်